Etu ịtụ - ASFO Store
Achọghị ịdebanye aha gị, mana ọ na-enye gị uru pụrụ iche!
Access ga-enweta onyinye na mkpọsa pụrụ iche: will ga-enweta Kupọns, onyinye, ego na ọtụtụ ozi na email gị edebanyere aha!
Zụta ngwa ngwa: Naanị dejupụta ibe anyị otu oge, a ga-etinye ozi gị na akpaghị aka mgbe ị na-azụ ahịa n'ọdịnihu.
Akụkọ iwu: You nwere ike ịlele mgbe ị zụtara.
Ịtụ 4 usoro dị mfe:
1. Debanye aha ma ọ bụ nbanye
Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa ọhụụ, ka i wee jiri atụmatụ nke weebụsaịtị a niile, ị ga-edebanye aha gị ma ọ bụ jiri akaụntụ Facebook gị. Then ga-atụgharịzie gị gaa na ibe ọhụrụ ebe ị ga-etinyekwu nkọwa gbasara onwe gị (adreesị zuru ezu na nke zuru ezu, nọmba ndebanye ụtụ isi, nọmba ekwentị ...). Ke ama okokụre ke kpukpru ubi oro ẹyomde, pịa “Chekwa”.
N'ịgbaso usoro a, ị nwere ike ịbanye na weebụsaịtị site na itinye ozi email na paswọọdụ gị.
2. Nchọgharị na Nhọrọ Ahịa
Iji chọta ngwaahịa ịchọrọ, ịnwere ike ịchọgharị NchNhr ma ọ bụ jiri nhọrọ "Nchọpụta ọsọ ọsọ" nke dị n'elu ibe ahụ. Iji lelee nkọwapụta ngwaahịa, pịa aha ya ma ọ bụ ihe onyonyo ya. Younwekwara ike iji “Ngwaahịa egosipụtara” na “Pụrụ iche” iji nweta ngwaahịa ndị masịrị gị.
Ọnụ ego egosiri na ibe ngwaahịa ọ bụla bụ nke ikpeazụ, tinyere VAT na ọdabara (a naghị etinye ego maka akwụkwọ ụgwọ ya ka ịhọrọ usoro nnyefe).
3. Shoppingzụ ahịa
Site na ịpị “Zụta” na ngwaahịa, a ga-atụkwasịrị nke a na '' Shoppingzụ ahịa '' gị, nke ga-enyere gị aka ịchekwaa, tinye ma wepu ihe, dezie ọnụọgụ ngwaahịa ma lelee ngụkọta ikpeazụ nke ego (ego anaghị akwụ ụgwọ maka ụgwọ akwụkwọ).
Ọ bụrụ n’itinyela aha gị ma banye na ozi gị, ihe dị n’ime “Shoppingzụ ahịa Shoppingzụ ahịa” gị ga-adị oge ọ bụla ịbanye na webụsaịtị ya ọbụlagodi na ị wepụrụ ha ma ọ bụ gaa na ndenye ọpụpụ.
4. Gaba n'ihu maka ndenye ọpụpụ
Mgbe ịchọrọ ịga n’ihu ndenye ọrịre nke ị tinyegoro na “Shoppingzụ ahịa ,zụ”, pịa “Zụrụ” n’elu akuku aka nri nke ibe ma ọ bụ na ibe “Shoppingzụ ahịa.
Ọ bụrụ n’itinyela aka mgbe ịpịrị “Zụta”, ubi ga “Nbanye” ga-apụta n’elu peeji nke “Gaa n’iru n’ule”. A sị na ịdenyebeghị aha na webụsaịtị anyị, ịnwere ike ịga n’ihu ịzụ ahịa n’ụdị ọ bụla, echefula ma jujuo n’ubi niile ịchọrọ iji debe iwu gị.
Mgbe anyị nwetasịrị arịrịọ gị, anyị ga-ezitere gị email na-akwado ya, yana nkọwa nke ngwaahịa ndị ị nyere iwu.
Bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịkpọtụrụ ndị ọrụ nkwado ahịa anyị site na email (kpọtụrụ@asfo.store) ma ọ bụ site na nkata (na ala aka nri nke ibe weebụ anyị).
American Express Apple Ṅaa Boleto Diners Club Discover Elo Hyperkaadị JCB MasterCard PayPal Santander visa